Akekho ongalichaza ukuthola umuntu owayeyoba awukaze uzwe Mike Tyson. Lokhu boxer uye ayedumile emhlabeni wonke, futhi manje igama lakhe iyohlale elihlobene ne isibhakela. Wabasaqalayo Abaningi futhi okwakwenza abashayi-sibhakela okhokhelwayo ukuhlonipha lo muntu futhi wenze kube ekahle yethu. Ukuze afinyelele eziphakeme esifanayo, basebenzisa ukuqeqeshwa Mike Tyson, phokophela kulo ukuba njengaye. Nawe ungaphumelela lapho ubhekene ukuziqeqesha Tyson.
ukuqeqeshwa Isisekelo Mike Tyson - kuyinto isimiso sakhe nsuku zonke. Ukuze kuzuzwe impumelelo efanayo, uzodinga ukuba alwele ukuphinda ngokunembile isimiso. Kodwa ungaqiniseka ngokuthi: ngokushesha lapho uku Mancane amathuba okuthi bakwazi ukuhlula kwakhe. Iqiniso lokuthi Mike wavuka emihlanu ekuseni ngokushesha yaphuma gijima ihora. Ngemva kokubuya kwakhe, waya eshaweni iqalele kabusha, bese saya kolala ngoba amanye amahora amane. Ngezinye yelishumi ekuseni Tyson akhwela off the bed and breakfast ke kafushane mayelana nebhizinisi lakhe futhi ntambama waya ehholo ukubamba sparring eyadonsa amahora amabili. Ngemva kwalokho, le boxer kwadingeka kwasemini futhi futhi ukuphumula kancane, futhi ngineminyaka engu-16 ezimpondweni futhi waya ekamelweni ukuba wedwa ukuzijayeza ngcweti. Wasebenzisa ukwenza izinhlobo ezahlukene amagonandoda. Ngemva kwehora, ngaqala ukuqeqeshwa isisindo Mike Tyson, eyathatha kuze eziyisikhombisa kusihlwa. Ngemva kwalokho Mike kwadingeka idina ukuphumula kancane futhi wenza umsebenzi wokugcina - cishe isigamu sehora wahlanganyela ngebhayisikili emile. Khona-ke wayehumusha ekutadisheni ihora izindaba emaphephandabeni naku-TV, bese sengilele at 21:30.
ukuqeqeshwa Mike Tyson kwakunzima kakhulu futhi ezisindayo. Ngeke esiwusizo abasubathi abaningi, kodwa futhi kulabo abafuna uphumelele, kubalulekile ukuba silwele Mike izinkomba. Kanjalo, isimiso ukuqeqeshwa kuhlanganisa Mike Tyson squats, push-ups, isiqu lift, Obonisa entanyeni. Ngokuphathelene oqeda esifubeni ke nakanjani kudingeka silwele Tyson inkomba, ngoba kuyinto izwe irekhodi umnikazi kunombolo usishukumisele umzimba ngehora. irekhodi lakhe - izikhathi 2201, okuyinto mayelana 36 awalethe ngomzuzu. Waphinde wenza ayinkulungwane Hlala-ups ngehora, ngakho-ke kungcono ukuqala amancane, kodwa khumbula ukuthi une njengesibonelo esihle.
Ngokwami isu elikhethekile yasungulwa Tyson ukuthi wenza kusukela ayengumuntu ofana nathi cishe elwa umshini. Umqeqeshi we-sibhakela odumile usungule isimiso digital zempi - yonke inhlobo umthelela iye assigned lalo. Ngokwesibonelo, iyunithi oluhambisana kwesokunxele Hook ikhanda, futhi eziyisishiyagalombili - jabs emzimbeni. ukuqeqeshwa Mike Tyson walala yokuthi umqeqeshi oyilandile uhlelo wayesekhathele boxer kuvuna inhlanganisela izinombolo. Boxer yena wahluleka ucabange ngalokho inhlanganisela ukuyisebenzisa - ke kuphela ngokulandela imiyalelo of the digital. Uma ufuna, ungazama uhlelo kanje wena - kuzo zonke engqondweni buhlungu, ukuhlela inombolo yakho futhi ucije Inhlanganisela automatism, ukuze bakwazi ukuba badlalele eduze nganekwane isibhakela.